माधव र उपेन्द्रजीहरुले लचकता देखाएपछिमात्रै मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउँछ : साह
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रभावशाली नेता गणेश साहले सरकारले छिट्टै पूर्णता पाउने दाबी गरेका छन् । आज (मंगलबार) विहान नेपाली रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भएको नेपाली
नेपाली कांग्रेसका नेता गोपालमान श्रेष्ठले १४औं महाधिवेशनमा आफूले सभापतिमा उम्मेद्धवारी दिने स्पष्ट पारेका छन् । यसको लागि आफू सम्पूर्ण रुपमा तयार भएर अघि बढिसकेको उनको भनाई थियो । आज विहान
कम्युनिष्ट बिग्रिए भने कुहिएको अण्डाभन्दा बढि बिग्रिन्छ भन्थे, माधव नेपालको त्यही हविगत हुँदैछ : सूर्य थापा (भिडिओसहित)
नेकपा (एमाले) का युवा नेता सूर्य थापाले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संविधानबमोजिम आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको बताएका छन् । उनले सभामुख सापकोटा र निर्वाचन आयोगको विरुद्धमा आफ्नो पार्टी कानूनी उपचारमा
ठाकुर गैरेलाई ऋषि धमलाको प्रश्न : माधव नेपालसँग जानुहुन्छ कि ओलीसँग सम्झौता गर्नुहुन्छ ? (भिडिओसहित)
काठमाडौं, ५ भदौ । नेकपा (एमाले) का प्रभावशाली युवा नेता ठाकुर गैरेले आफूहरु अहिले पार्टी एकताको पक्षमा उभिएको स्पष्ट पारेका छन् । पार्टीलाई विभाजनबाट रोक्दै एकता अभियान अघि बढाउने पक्षमा
एमालेमा पसेर प्रचण्डले खेल्ने कुरामा केपी ओलीको पूर्वअनुमानको कमी देखियो : अधिकारी (भिडिओसहित)
काठमाडौं, ५ भदौ । नेकपा (एमाले) का प्रभावशाली नेता तथा पूर्व गृहमन्त्री खगराज अधिकारीले १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्नको लागि अध्यक्ष केपी शर्मा ओली तयार भएको स्पष्ट पारेका छन् ।
काठमाडौं, ४ भदौ । नेकपा एमाले (समाजवादी) का केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद विरोध खतिवडाले आफूहरुको पहिलो प्राथमिकतामा पार्टी निर्माण, वामपन्थी आन्दोलनको रक्षा, संविधान र गणतन्त्रको रक्षा रहेको सुनाएका छन् ।
अध्यक्ष नपाएको भन्दै माधव नेपालले पार्टी विभाजन गर्नु गलत हो : युवराज ज्ञवाली (भिडिओसहित)
काठमाडौं, ३ भदौ । नेकपा (एमाले) का उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवालीले आफूले माधव कुमार नेपाललाई धोका नदिएको स्पष्ट पारेका छन् । उनले आफूहरुको अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग ठूलो मतभेद रहेको सुनाए
‘नेपालमा भारतको सहयोग सुरुदेखिनै रहेको छ, यो सहयोग हामीलाई निरन्तर आवश्यक छ’ : डा. भट्टराई
परराष्ट्रविद् डा. दिनेश भट्टराईले नेपाल–भारत द्धिपक्षीय सम्बन्ध थप उचाईमा पुग्ने र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको कार्यकालमा सम्बन्ध झनै प्रगाढ बन्ने विश्वास दिलाएका छन् । हिजो (आइतबार) नेपाली रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भएको
‘भारतसँग विश्वासको सम्बन्ध विकास गर्न वर्तमान सरकारले काम गर्छ’ : डा. महत (भिडिओसहित)
काठमाडौं, ३१ साउन । नेपाली कांग्रेसका सह–महामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले भारतमा लोकतन्त्र सफल हुनु भनेको नेपालमा पनि लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता कार्यान्वयनको लागि प्रेरणा मिल्ने बताएका छन् । भारतको ७५औं
हाम्रो कारणले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाई भएको होईन, यो गठबन्धन कायम रहन्छ : दिनानाथ शर्मा (भिडिओसहित)
काठमाडौं, ३० साउन । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रभावशाली नेता दिनानाथ शर्माले पार्टीलाई अब सशक्त बनाएर लैजाने स्पष्ट पारेका छन् । उनले आजबाट सुरु भएको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पार्टीको संगठनलाई
‘आगामी निर्वाचनसम्म हाम्रो गठबन्धन कायम रहन्छ’ : लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केसी
लुम्बिनी प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी ‘सोनाम’ ले आफ्नो सरकारको पहिलो प्राथमिकता भनेको आम प्रदेशवासीलाई कोरोनाबाट जोगाउनु रहेको भन्दै यसबारेमा योजना बनाएर नै काम गरिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । आज
एक हप्ताभित्रै सरकारमा जान्छौं, नयाँ पार्टीको नाम एकीकृत कम्युनिष्ट यस्तै केही राख्छौं : मेटमणि चौधरी
नेकपा (एमाले) का नेता तथा सांसद मेटमणि चौधरीले आफूहरु नयाँ पार्टी खोल्नेगरि छलफलमा जुटेको बताएका छन् । तर, अहिले छलफलमै भएकोले के हुन्छ ? भनेर यसै भन्न नसकिने पनि उनले